Wararka Maanta: Khamiis, Jan 31, 2013-Guddiga Doorashooyinka Puntland oo Shaaciyay Xeerka iyo Anshaxa Ururrada Siyaasadda ee ka qaybgalaya Doorashooyinka
Guddiga doorashooyinka iyo madaxda ururada-siyaasadda ayaa maanta ku kulmay xarunta hay’adda cilmi baarista Puntland ee PDRC ee magaalada Garoowe, waxaana isla goobta xeerkan ku saxiixay shan ka mid ah lixda urur siyaaasadeed ee Puntland.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Maxamed Xasan Barre oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sharraxaad ka bixiyey halka uu marayo geedi-socodka dimuqraadiyadda ee Puntland, wuxuuna xusay in uu xiligan meel fiican marayo.
Qodobada ugu muhiimsan ee uu xeerkani dhigayana waxaa kamid ah: In ururadu ay is tixgeliyaan muddada ay diiwaan gelintu socoto, in madaxda ururada aan loo ogolayn hub, iyo weliba qaabka ay is-diiwaan gelinta taageerayaasha ururadu u dhacayso.
Taageerayaasha laga rabo inuu urur kasta la yimaado ayaa ah ugu badnaan 313 qof, waxaana sidoo kale la shaaciyey in muddada is-diiwaan gelintu ay ku egtahay 9-ka bisha soo socota ee Febaraayo 2013.
Ururka dadka Puntland (UDAD) ayaan isagu xeerkan saxiixin, waxaana gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee ururkaasi mar uu maanta warbaahinta maxalliga ah la hadlayey sheegay, in ay dhaliilsan yihiin qaar kamid ah qodobada uu xeerkani dhigayo.
Ururada siyaasadda Puntland ee ay dhowaan guddiga doorashooyinku soo xuleen ayaa wada dadaal ku aadan sidii ay isugu diyaarin lahaayeen doorashooyinka goleyaasha deegaanka.
Waxaana xusid mudan in sadexda urur ee codadka ugu badan doorashadaas ka helaa ay noqon doonaan axsaabta rasmiga ah ee ku loolami doona hoggaanka siyaasadda ee Puntland.